JOINTS Factory, Alaab-qeybiyeyaal - Shiinaha SHAQAALAHA SOO SAARAYA
VSSJA-2 (B2F) Nooca Double Flange Xaddidan Wadajirka Telescopic
Waxyaabaha naqshadeynta alaabooyinka Muhiimka ugu weyn ee badeecaddu waxay ka samaysan tahay qalab tayo sare leh, adayg sare, fududahay in la isticmaalo, isla markaana deg deg u rakibo. Waxay leedahay iska caabin daxal wanaagsan, caabbinta saliidda, aashitada iyo caabbinta alkali. Naqshadeynta qaabdhismeedka wax soo saarka ayaa macquul ah. Waxqabadka shaabadu waa mid lagu kalsoonaan karo. Wax alxamid looma baahna. Si sahlan loo raro loona soo dajiyo, waxay magdhabi kartaa barakaca, qaabeynta iyo foorarsiga dhuumaha inta u dhexeysa. Mabda 'u shaqeyntu waa ka dib bei ...
Joint Rubber jilicsan
Astaamaha waxqabadka Isugeynta caagga jilicsan, kaas oo sidoo kale loo yaqaan gariirka gariirka, dhuumaha gariirka gariirka, wadajirka dabacsan iyo isku xirka tuubada iyo wixii la mid ah, waa isku xirnaanta tuubbada leh dabacsanaan sare, cidhiidhi hawo sare leh iyo iska caabin dhexdhexaad dhexdhexaad ah iyo cimilo iska caabin. Astaamaha wax qabadkiisu waa: 1. Way yar tahay cabirkeedu, miisaankiisu waa fudud yahay, jilicsanaanta kufiican, ku haboon rakibida iyo dayactirka 2. Inta lagu guda jiro rakibidda, transverse, axial iyo barakac xagal doonaa ...